Ungachinja sei Wallpaper pa iPhone ne iPad mune iOS 9 | IPhone nhau
Ungachinja sei Wallpaper yeangu iPhone, iPad kana iPod Kubata neIOS 9
Juan Colilla | | iOS 9, iPhone, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Maitiro ekumisikidza kana kuchinja Wallpaper muIOS nzira yake yanga ichisiyana Mumakore ese, kubvira Apple payakaburitsa mukana uyu kumashure mushanduro dzayo dzekutanga dze iPhone OS, nzira inoshandiswa nechinangwa ichi yasiyana pasina kuwana nzvimbo kwayo zvachose.
Nechikonzero ichocho nhasi tinokuunzira dzidziso pamusoro maitiro ekuchinja Wallpaper muIOS 9, iyo vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu ye iPhone, iPod Kubata uye iPad zvishandiso izvo zvava kuda kuburitswa. Pane ino nguva ndingati yakachinja zvakare kubvira iOS 8 (kana ndikarangarira nemazvo), chandiri chokwadi ndechekuti zvachinja zvine hukama neIOS 7.
1 Ungazviita sei?
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita ndeche enda kune iyo «Zvirongwa» kunyorera yeedu kifaa cheIOS, ichi chishandiso ndiyo nzvimbo yepakati yetsinga, uye zvirokwazvo ndiyo nzvimbo yakanakisa yekuisa chikamu ichi.
Pane imwe nguva mukati megadziriro isu isu tinofanirwa kutevedzera anotevera matanho:
Slide menyu pasi kusvikira wawana chikamu chinonzi "Wallpaper" kuti mumufananidzo wakakomberedzwa nezvitsvuku wobva wadzvanya pairi.
Kamwe mukati, zvinoenderana nechinangwa chatinotsvaga, tine matanho maviri kusarudza; Kana isu tichida kugadzirisa yedu yazvino Wallpaper (saizi kana chinja pakati parallax uye static modhi) isu tinongofanirwa kubata iyo chikamu chatinoda kugadzirisa, ingave iyo yekuvharira sikirini kana yekumba skrini (pane mifananidzo).
Muchiitiko chekuti chinangwa chedu ndechekumisa nyowani nyowani, isu tinofanirwa kusarudza sarudzo inoonekwa pamusoro pemifananidzo mune yechipiri pikicha, inonzi «Sarudza imwe homwe».
Pane imwe nguva mukati mechikamu chino, Apple inotipa sarudzo nhatu dzekugadzirisa:
1. Mamiriro Ekusimba (ine mifananidzo).
2. Zvichiri mifananidzo (default kumashure paIOS).
3. Mifananidzo kubva kuraibhurari yedu (izvo zviri pane yedu reel).
Isu tinosarudza iyo yatinoda zvakanyanya uye tinoenderera mberi kuchikamu chinotevera.
Sezvo isu tave kutoziva kuti ndeipi Wallpaper iyo yatinoda kushandisa, ingave ine simba, yakagadziriswa kana kubva kune yedu reel, isu tinongofanirwa kuigadzirisa isu mukuda kwedu uye nekuipa kwainoenda, nekuti izvi isu tinoteedzera nhanho idzi:
Kana tangoziva nhoroondo yatinoda, tinoibata.
Chidzitiro senge chechipiri chiri mumufananidzo chichaonekwa pamitsara iyi, pano isu tinofanirwa kufamba uye kudzikisira kumashure kwedu nezvigunwe (sezvatinobata chero mufananidzo pane reel), uye wozosarudza kana tichida kuti igadziriswe kuita "Kunofambira mberi" kana ne "Pfungwa".
Musiyano uripo pakati pema modes aya uri nyore kwazvo, mune static mode mufananidzo wedu unoramba wakamira pasina kufamba, sekumugadzirisa kwatakaita. Nekudaro, mumamiriro ekuona, mufananidzo wedu unofamba zvichienderana nekutarisisa kwechigadzirwa chedu, zvichipa kutenderera kwematatu, chimwe chinhu chakanakisa asi chine zvazvakashatira.
Mune maonero mamiriro ezvinhu mifananidzo yacho inofanira kugadzirirwa kuitira kuti mufananidzo wacho uve muhombe pane skrini kuitira kuti mudziyo uratidze nzvimbo yakawanda kana ichifamba, izvi hazvifanire kukunetsekana sezvo zvichizoitwa zvega paunosarudza, kune rimwe divi iwe unofanirwa ziva kuti inoshandisa bhatiri rakawanda nekugara uchishandisa iyo gyroscope uye accelerometer kuona maitiro ayo uye iyo GPU kugadzirisa iyo 3D mhedzisiro.
Kana tangosarudza iyo modhi inonyatsoenderana nezvatinoda nezvatinoda, isu tinongofanirwa kubaya bhatani "Pin up" uye sarudza (yechitatu skrini mumufananidzo pane iyi mitsara) kune inozoiswa skrini, kukiyi (kwatinotsvedza kuti tivhure), kumba (kune maapplication edu) kana ese ari maviri.
Iyo Wallpaper ingaite senge isingakoshe nyaya, zvisinei izvi hazvisizvo, sarudzo yatinoita inoratidzwa mukuonekwa kwechigadzirwa chedu uye mashandiro ayo.
Matipi angu ndeaya:
Kana iwe uchifunga kuti yako iPhone iri fusion pakati pekunaka uye tekinoroji uye iwe unoremekedza iro basa rakaitwa naJonathan Ive pakurigadzira, sarudza kumashure zvinoenderana nezvaunoda asi izvo zvinotevera minimalist dhizaini dhizaini (iyo yakanyanya kutakurwa neruzivo zviri nani) uye iyo inoremekedza resolution ye iPhone yako skrini, iyo yako kuva nemutungamiri kana uchitsvaga chako, anotevera zvinoenderana nemodeli (yakamira x yakatwasuka):
Kune rimwe divi unofanirawo funga kuita kwechigadzirwa, pane sarudzo mbiri dzinokanganisa zvinoenderana neiyo iPhone modhi yauinayo, uye iwo akasimba mamiriro uye maonero maitiro, mazano angu zvichienderana nemuenzaniso ndeaya:
iPhone 4 / 4s: Yakagadziriswa mapikicha uye ari emhando yemhando, nekuda kweiyo yakati rebei GPU uye mashandiro emidziyo iyi iine chero eaya maviri sarudzo dzinogoneswa zvinogona kukanganisa zvakaipa zvese fluidity yeiyo system uye hupenyu hwebhatiri.
iPhone 5 / 5c: Yakagadziriswa mapikicha, pane iyo yekuvharira skrini isu tinogona kuisa kumashure mune yakatarisa modhi kuti tipe iyo 3D yekunzwa kana uchiizarura kana kutarisa nguva isina zvakanyanya kukanganisa fluidity kana bhatiri.
iPhone 5s / 6: Pane iyo skrini yekukiya tinogona kusarudza yakagadzika kana ane simba mapikicha, mune yakamira kana maonero maitiro, pane zvatinosarudza, kunyangwe izvi ini ndinokurudzira kuti tirege kuisa masimba akasimba pachiratidziro chekumba, izvi zvinogona kukanganisa hupenyu hwebhatiri, iyo GPU Chishandiso chinogona nyore kubata chero sarudzo, kunyangwe izvi hupenyu hwebhatiri hwakatokwana kuita kuti iite yekugadzirisa mifananidzo pachiratidziro chekumba, chinhu chaunogona kuita kana uchida asi zvichaderedza nguva yebhatiri re iPhone yako.
iPhone 6 Uyezve: Dynamic kana yakatarwa kumashure, mune yakamira kana maonero maitiro, pachiratidziro chekumba, pane yekuvhara skrini kana ese ari maviri. Chinhu chimwe chete ichi chinoitika muiyo iPhone 6 Plus sekune iyo iPhone 6 ne5s, iyo GPU inokwanisa kubata nemifananidzo munguva chaiyo yekurega, uye isu zvakare tine bhatiri rakakwirira kwazvo iro rinotibvumidza kushandisa mashure aya nerusununguko rwakazara.
Ndinovimba zvese zvave pachena kwauri neiyi dzidziso, zvisinei izvo, kana iwe uine chero mibvunzo kana zvinonetsaTiudzei mune zvakataurwa, timu yedu yevagadziri ichafara kukubatsira!
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Ungachinja sei Wallpaper yeangu iPhone, iPad kana iPod Kubata neIOS 9
Handizive kana zviri kungoitika kwandiri. Ini pandinoisa Wallpaper kubva kune yangu reel inoimisa iyo nezvose. Uye pandinobuda ndinoona Wallpaper rangu rakasviba kumusoro pane kuzasi.
Paive nezvinhu zvakawanda zvandaisaziva, mwedzi minomwe neangu iPhone 7 uye ini ndanga ndisingazive zvese izvo .. (chinja mari kana ..), zvinhu zvipi izvo munhu anogona kudzidza kana munhu anyatsoongorora nyaya yacho!
Chinyorwa chakanaka kwazvo Juan !!
PS: ikozvino maHove eiyo yazvino iPhone ichabuda kuzotsoropodza kuti inyaya yemarara uye kuti iwe hauna chimwezve chinhu chekuisa ...
PS 2: izvi zvinoshandira kutsva kuIOS!
Kwazisai zvakare uye yakanaka chinyorwa zvakare 😛
Ndatenda kwazvo Rafael, makomendi senge ako anoita kuti zvive zvakakosha uye nekuzvipira mukugadzira zvinyorwa zvakaita seizvi, ini ndaitarisira kuvenga kwakawanda kunyangwe parizvino panga pasina chinhu, ndatenda futi, uye nezve izvo iwe zvausingazive, Iwe hauna enda kunorara usina kudzidza chimwe chinhu chitsva!
Uye ndizvo zvatiri pano, kuti tikupe ruzivo rwese rwatinogona 😀 Unoziva, chero mibvunzo, mazano, zvichemo nevamwe, usazeze kupindura ^^
Kwaziso yakanaka muverengi anodiwa
Kune iwe Juan, yekuunza zvinyorwa zvinonakidza kwazvo.
Mazuva ese iwe unodzidza chimwe chinhu chitsva, kunyangwe iri bhuru asi chiri chinhu chawaisaziva uye ikozvino unoziva!
Ini ndaida kuziva kuti iwe unondikurudzira kuti ndiise zvakajairika Apple kumashure kana pikicha yeseri senge pikicha yangu
Mangwanani, ndine iPhone 6, uye ndine dambudziko haripe mukana we "tuli uye maonero", ndinotenda kana uchikwanisa kundipa mhinduro
Daniel Cayo akadaro
Tarisa iwe unofanirwa kuenda kuzvirongwa - zvakajairika - kuwanikwa - kudzikisira kufamba uko iwe unofanirwa kuisiya isina kugadzirwa uye ndizvozvo
Pindura kuna Daniel Cayo
Usati wagadzirisa mufananidzo wemenyu, ikozvino zvinongondipa sarudzo yekuchinja mufananidzo wekiyi yekukiya. Chero mhinduro? Ndatenda ☺️
Uye ndinoita sei nezve kudzoreredza yekutanga mamiriro? Ndatenda
Anodiwa, ini ndakachinja yangu Wallpaper, asi ini ndoda kudzoreredza kumashure kumashure uye ini handisi kuiwana. : / sezvandinoita?
Ndinovimba vanondibatsira. maererano
Vianey Ledezma Gzz akadaro
Batsirai, NDISATI NDATARISIRA WALLPAPER Sarudzo, IZVOZVI HAZVIONEKERE KWANGU
Chii chandingaite? Ndinovimba vanondibatsira
Pindura Vianey Ledezma Gzz
Daniel sanchez akadaro
Nekuti ini handigone kuchinja yangu screen foto (zvese) zvinoita sekunge yatoshandurwa uye hapana. Ini ndinogona chete kuisa mapikicha kana maficha anouya mu iphone.help
Pindura kuna Daniel sanchez
Apple Inoburitsa Shambadziro Itsva ye "Kana Isiri iPhone, Haisi iPhone" Campaign